बेलायतमा कोरोना अनुभव र पुनर्जीवन – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/बेलायतमा कोरोना अनुभव र पुनर्जीवन
‘यदि ज्ञान बाँड्न सकिंदैन भने त्यो महत्वहीन हुन्छन् ।’
भौतिकशास्त्री मिचीको काकुको उक्त्त भनाइले मलाई जिन्दगीमा यदाकदा घचघच्याइ रहेको हुन्थ्यो । आफ्नो जीवन कालमा मानिसले जे अध्यान एबम अनुभव गरेका हुन्छन् ति सबै बाँड्न सकेभने समाजले राम्रो फाइदा लिन सक्छहोला जस्तो मेरो मनमा लागि रहन्थ्यो । त्यसैलाई आधार मानेर मैले भर्खरै लिएको कोरोना अनुभवलाई अक्षररुपि भाषामा परिणत गर्ने यहाँ जमर्को गरिरहेको छु ।
हुन त यस धर्तिमा जीवनरुपी भरयाङ्गको मैले पचपन्न खुटकिलाहरु पार गरिसकेको थिएँ । तैपनि बास्तविक जिन्दगीको परिभाषा अझै खोजिरहेको थिएँ । झन कुनै कुनैबेला यस्तो लाग्ने गर्दथ्यो । जन्मदेखी मृत्युसम्मको समय मात्र ‘जीवन’ हो र बाँकी सबै परिभाषित नगरिएको एउटा कथा जस्तै हुन् ।
अ…यसरि नै मेरो जिन्दगी एउटा ९० डिग्रीको कोण झै सिधै उँभोउँभो चँढिरहेका थियो । तर, अनायसै एकदिन जिन्दगी खालिपानामा शिसाकलमले कोरिएका बक्ररेखा झै लरबरिदै आयो । अकस्मात त्यसरि कोरिएका बक्ररेखा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक धरातलभन्दा सोर्है आना फरक भएर आएको थियो । तर त्यसले पारेको असरले जीवनमा एउटा नरमाइलो छाँप छाडि राखेर सँधै सँधैको लागि बिदा भएर गयो ।
१८ डिसेम्बर २०२०, कृष्णपक्षको एउटा कालोदिन थियो । कोरोना महामारिको बेला अग्रपङ्त्तिमा रहेर कर्तब्यपथमा लडाइ लडिरहेका दुःखी छोरोले शिथिल र क्लान्त शरिर लिएर त्यस बेलुकि घर आएको थियो । त्यसै त बेलायती डिसेम्बरको महिना दिउसोको चार बजे नै रात पर्ने गर्दथ्यो । त्यसमाथि झन कालो, मैलो र धमिलो कुहिरोले छपक्कै ढाकेको उसको अनुहार घरभित्र छिर्दा सदाझै अनुहारमा दिप्त प्रकाशका ज्योति देखापर्न सकिरहेका थिएनन् ।
घर भित्र पस्ने बितिक्कै, ‘खत्तम भइयो ?’ भन्ने एउटा शकांस्पद प्रश्न हावाको गति सँगसँगै उसले छाडि पठायो । निमेषभरमा उसको त्यो प्रश्नबाचक शब्द तारा र मेरो कानकानसम्म पुगेर ठोकियो, किनभने हामी दुवैजना उसको नजिकै कुर्सिमा आराम गरेर बसिरहेका थियौ । एकान्त जङ्गलमा कोईलीको बिरहलाग्दो भाकाझै छोराको बिरहलाग्दो भाकाले किन त्यसो भनेको होला भनेर हामी दुवैजना एकछिन चुपचाप बस्यौ र घोस्सेमुन्टो लगाएर भुइँतर्फ हेरेर घोप्टिरह्यौ ।
‘ड्याडी ! थर्ममिटर कहाँ छ ?’
उसले मधुरो स्वरमा दोश्रो चोटि मुख खोलेपछि, सायद उसलाई ज्वरो आएको हुनसक्छ भन्ने मैले आंकलन गरिहालें । प्रश्नको उत्तर दिन जरुरि ठानिन त्यसैले चाँडोचाँडो घरको तलामाथि चँढेर थर्ममिटर झारे र उसलाई थपक्कै टक्र्याइ दिएँ । थर्ममिटर हातमा पर्ने बितिक्कै उसले आफ्नै ज्वरो नाप्न थाल्यो ।
‘ए ! ज्वरो त सयडिग्री भन्दा उकालि चढिसकेको रहेछ,’ उसले सानो स्वरमा बरबराएको मैले नजिकबाट सुनिरहें । त्यसपछि, उसको साथैमा बोकिरहेको झोलादेखि ल्यापटप निकालेर माउ पोथी कुखुराले मकैको दानो टकटक टिपे झै औलाले घोच्न थाल्यो । उसको साथमा अर्को एउटा सानो झोला पनि थियो । र, त्यस झोलादेखी ‘ल्याटेरल फ्लो टेस्ट’ (एलएफटी) निकालेर आफ्नै सिगान जाँच्न थाल्यो ।
केहि समयपछि एलएफटीको अनुहारमा दुईवटा काला धर्साहरु देखापरें । तिनै धर्सामा परिणत भएको नतिजालाई देखाउदै कोरोना पोजिटिभ भएको दुःखद समाचार हामीलाई सुस्तरि सुनायो । उसको भनाइलाई मैले थोरै बिरमाइलो मान्दै सुनिरहें र थोरै बेखुशि हुदै एलएफटीको नतिजालाई एकचोटि राम्ररि हेरें ।
हामी त्यसबेला भान्सा कोठामा थियौ, र ताराले उसको लागि खाना तयार गर्दै थिइन । छोराको दुःखद समाचार सुन्ने बितिक्कै उनी थोरै झस्किइन र अतालिदै हामी तिर फर्किइन । तर, उनीहरु भन्दा म नै अलिक बृध्द अबस्थामा पुगेको थिएँ, त्यसैले भित्रभित्रै डराएको कछुवाझै एकपोका परिरहें ।
आँधा घण्टाको हैरानीपछि एलएफटिले तारालाई पनि पोजिटिभ भएको परिणाम देखाइ दियो । हाम्रो एकजना छोरी पनि थिइन र उनी हामी भन्दा केहि टाढा अर्को सहरमा बस्थिन । छोरीले घर छाडेपछि गत महिनादेखी छोरा हामीसँग बस्न आएको थियो । त्यसैले हामी तीन जना एउटा घरमा बस्दै आएको थियौ । ताराको नतिजा आएपछि, ‘मैले बुँझे, अब मलाई जाँच गरिरहन जरुरि छैन,’ भनिहालें ।
त्यसदिनदेखी घडिको काँटा धिलो घुम्न थालेका जस्तो लाग्न थाल्यो । हरेक सेकेण्ड, मिनेट र घण्टा हुदै बल्लबल्ल घडिले दिनको एघार बजायो । तारा केहिबेर अगाडि उठेकी थिइन, तर छोरा त्यसबेलासम्म उठन सकिरहेको थिएन । म उसको कोठा बाहिर पुगेर तेश्रो चोटि कराएँ । मैले ठूलो स्वरमा कराएपछि, थरथरि काम्दै निक्कै मुश्किलले छोरो उठ्यो र एकचोटि आङ्ग तन्कायो । ऊ उठने बितिक्कै हामी ‘उडग्रिन मनोरन्जन क्रेन्द्र’ बानबुरिमा पुगेर पिसिआरको परिक्षण गरयौ । स्थानिय सरकारले उडग्रिन मनोरन्जन केन्द्रलाई अल्पकालिन ‘कोभिड केन्द्रमा’ परिणत गरेको थियो ।
पिसिआरको परिक्षणपछि घर फर्किरहेका थियौ । तर, ज्वरो र सुख्खा खोकिले हामी सवैजना ग्रसित भएर थकित मुद्रामा थियौ । हामी कसैलाई बोल्ने जाँगर चलिरहेको थिएन । मैले कार हाँकिरहेको थिएँ र आफ्नै धुनमा बिबिसी रेडियो एकोहोरो बजिरहेको थियो । रेडियोदेखी ठिक बार्हबजे आँफै समाचार भट्टिन थाल्यो । बेलायतमा कोभिड १९ ले हरेक दिन आठ नौ सय जनाको हाराहरिमा मानिसहरुले जीवन गुमाईरहेका छन् भन्ने समाचार फियोना ब्रुसले दुःखित हुदै पढेको सुन्दा तारा झसँग भइन र उनको कागखुट्टिलाई थोरै तन्काइन् ।
उनले त्यसबेला खुट्टि मात्रै तन्काएकी थिइनन्, ‘अब के हुन्छ ?’ भनेर मतर्फ इङ्गित गर्दै एउटा छोटो प्रश्न गरिन । मैले प्रत्युत्तरमा, ‘जे नहुनु थियो, त्यो भइहाल्यो । आखिर कोही मानिस अजम्बरि हुदैनन् र मर्न कसैलाई रहर छैन । अहिले मृतसँजिबानिको बुट्टिले पनि कसैलाई काम गर्नेवाला छैन । तिम्रो जीवनको अन्तिम इच्छा के के छन् भनिराख्नु हामीमध्ये जो बाँच्न सक्छौ उसले हाम्रा अभिष्ट इच्छाहरु पुरा गर्ने प्रयत्न गरौं । तर, त्यसो भनिरहदा कुनैपनि मूल्यमा तिसबर्षे छोरोको मृत्यु चाँही हेर्न म सक्त्तिन होला ?’ सुस्तरि उनलाई भने ।
अर्धमृत अबस्थामा जिइरहेकी ताराले त्यसरि एकाबिहानै मुख खोल्दा मलाई थोरै भएपनि राहत मिलेको थियो । समयले नेटो काटिरहेको थियो । कोभिड शंक्रमणले दुईहप्ता पार गरेपछि पुनः कोभिड केन्द्र पुगेर दोश्रोचोटि स्वाब परिक्षण गर्यौ । चिन्तित ७२ घण्टाको प्रतिक्षापछि नेगेटिभ नतिजा हात पारेर हामी ढुक्क भएका थियौ । निश्चय नै हामीले कोरोनापछि पुनर्जीवन पाउन सकेकोमा केहि हदसम्म खुशि त भएका छौ, तर महामारिले धर्तिका सबै मानिसहरु भाग्यमानि हुन नसकेकोमा धेरैधेरै दुःखित बनेका छौ ।
प्रेमिकालाई छुन नसक्दा अक्षयकुमारको ब्रेकअप
भिडियो लिक गर्ने ध म्कि दिँदै मन्त्रीसँग स म्बन्ध रा ख्न दबाबपछि मोडलले ६ तलाबाट हा म फालिन्